Sat, Jul 11, 2020 at 1:41pm
काठमाडौँ, ११ असोज । दशैँ सुरु भएसँगै बजारमा नुनदेखि सुनसम्मका सामानको किनमेल गर्नेको चहलपहल बढेको छ । राजधानीको केन्द्रबिन्दु नयाँ सडकमा त दशैँको रौनक अझै व्यापक छ । व्यापारीहरूको पनि वर्षभरिको आम्दानी हुने मुख्य समय दशैँ, तिहारजस्ता चाडमा नै भएकाले बजार चम्कन थालेको हो । स्थायी घर गोरखाका गणेश भट्टले आफूहरू पनि दशैँ मनाउन केही आम्दानी गर्नुपर्ने भएकाले दशैँको मौका छोपी व्यापार..
काठमाडौँ, १० असोज एशियाली विकास बैंकले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले आज ‘नेपाल म्याक्रोइकोनोमिक अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै पूँजीगत खर्चमा हुने वृद्धि, निजी क्षेत्रको सबल लगानी तथा ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारले पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई बढावा दिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले सामान्य मनसुन, ठूला भौतिक पूर्वाधारको योजनाले गति लिएको, पर्यटक आवागमनमा भएको..
आज पनि घट्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
काठमाडाैं, १० असाेज । शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्यमा गिरावट आएको छ । आज सुन प्रतिताेला २ सय रूपैयाँले घटेकाे हाे ? हिजो प्रतितोला ७१ हजारमा कारोबार हुँदै आएको सुन भाउ घटेर आज 'शुक्रबार' ७० हजार ८ सयमा कारोबार भइरहेको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि सुनको मूल्य ७० हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ। केही दिनयतादेखि सुनको मूल्यले नयाँ रेडर्क बनाउँदै अघि बढेको थियो। प्रतितोला..
आइएमईमार्फत् पैसा पठाउँदा पाइन्छन् यस्ता सुविधा र उपहार
काठमाडाैं, १० असोज। यूएईबाट आईएमईमार्फत् नेपाल पैसा पठाउँदा यूएईमा कार्यरत दुई नेपालीका परिवारले दोब्बर रकम उपहार पाएका छन्। आईएमई दशैं तिहार डबल’ योजना अन्तर्गत ३० हजार रुपैयाँ घरमा पैसा पठाउँदा यूएईमा कार्यरत स्याङ्जाका विजयी नेपालीले ‘लक्की ड्र’ मार्फत ३० हजारको दोब्बर रकम ६० हजार रुपैयाँ पाएको आईएमई यूएईका प्रमूख उत्तम बस्नेतले जानकारी दिए। यस्तै अघिल्लो हप्ता सुनसरीका महेश आलेले ६ हजार रुपैयाँ..
रोजगारी खुलेसँगै मलेसियामा एक लाख युवालाई रोजगारी
काठमाडाैं, १० असाेज । मलेसियामा १ लाख नेपाली युवाले राेजगारी पाउने सम्भावना देखिएकाे छ ।नेपालीका लागि मलेसियामा रोजगारी खुलेसँगै करिब एक लाख युवाले रोजगारी पाउने सम्भावना देखिएको हाे। सरकारले मलेसियाको रोजगारी खुलाउने तयारी सुरु गरेसँगै म्यानपावर र अन्य निकायमा विभिन्न प्रक्रियाका लागि आवेदन दिएर प्रतिक्षामा रहेका एक लाख भन्दा बढी युवाले रोजगारी पाउने खबर आजको कारोबार दैनिकमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन्। मलेसियाको..
लगातार बढेकाे सुनकाे मूल्य आज ह्वात्तै घट्याे, कति पुग्याे ?
काठमाडौं, ९ असाेज । लगातार बढेकाे सुनकाे मूल्य बिहीबार ह्वात्तै घटेकाे छ । आज सुनकाे मूल्य ताेलामा एक हजारले घटेकाे हाे । सुन तोलाको ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन ७० हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार तोलामा ६ सय रुपैयाँ बढेर तोलाको ७२ हजार रुपैयाँ पुगेको सुनको भाउ बिहीबार घटेको हो। यस्तै, चाँदी..
विश्व बैंकको सहयोग : पूर्वाधार र क्षमता विकासलाई ५६ करोड
बलेवा, ९ असोज बागलुङ नगरपालिकामा शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनाले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीको थालनी भएको आयोजनाका कायम मुकायम निर्देशक रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । आयोजनासँग सम्झौता भएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदा बागलुङ नगरपालिकाले ५६ करोड रुपैयाँ..
काठमाडौं, ९ असोज दसैं नजिकिँदै गर्दा सर्वसाधारणकाे ढाड सेक्ने गरी तरकारीकाे मूल्य बढेकाे छ । चाडपर्वका बेलामा अत्याधिक खपत हुने तरकारीको मूल्य उपभाेक्ताले थग्नै नसक्ने गरी बढेको हाे । ‘हप्तादिन अघि १ सय २० रुपैयाँ धार्नीमा लगेको आलु अहिले १ सय ८० रुपैयाँ पुगिसकेछ’ एक उपभाेक्ताले सुनाइन् । हरेक चाडपर्वका बेला तरकारीको मुल्य बढ्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी ढंगले..
काठमाडौँ, ८ असोज केन्द्रीय कारागार कारखानाद्वारा सुति कपडाको सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कारागारमा रहेका कैदीले बुनेका कपडाहरू पसलमा राखिएको कारागार प्रमुख रामहरि ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १० वर्षभन्दा बढी समयसम्म कैद भएर बसेका कैदीले कपडा बुन्ने कामगर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई काम गरेका आधारमा ज्याला दिइने गरेको छ । कारागारमा पुजिँ परिचालन कोष सञ्चालन गरिएको छ । सोही कोषमा..
फेरी ६ सयले बढ्याे सुनकाे मूल्य, आज कति पुग्याे ताेलाकाे ?
काठमाडौं, ८ असाेज । बुधबार नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य बढेकाे छ । आज सुन प्रतिताेला छ सयले बढेर ७२ हजार रुपैयाँ कायम भएकाे छ। मंगलबार एक सय रुपैयाँले बढेर ७१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार ६ सयले बढेर ७२ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि सामान्य वृद्धि भएको छ । आज चाँदी तोलाको..
खुद्रा व्यापारीलाई सहकारी ढाँचामा व्यवसाय थाल्न सुझाव
काठमाडौँ, ७ असोज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सानासाना पूँजी र क्षेत्रमा रहेर व्यापार गर्दै आएका खुद्रा व्यापारीलाई सङ्गठित भएर एकीकृत रुपमा कारोवार गर्न सुझाव दिनुभएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घको ४०औँ वार्षिक साधारणसभामा उहाँले सबै खुद्रा व्यापारी एक भएर सहकारी ढाँचामा व्यवसाय गर्न आग्रह गर्नुभयो । “अब खुद्रा व्यापारी पनि सङ्गठित हुनुपर्छ, सहकारी ढाँचामा व्यवसाय थाल्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी ‘मोडल’मा गएपछि..
बक्यौता उठाउँदै प्राधिकरण, कुनले कति तिर्न बाकी ?
काठमाडौँ, ७ असोज । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मातहतका विभिन्न निकाय, एयरलाइन्स, सरकारी कार्यालय, फर्म एवं व्यक्तिलाई बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गरेको छ । सरोकार भएका ती निकायले विभिन्न शीर्षकमा रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको भन्दै प्राधिकरणले आज सूचना निकालेर ३० दिनभित्र उक्त रकम र नियमानुसार विलम्ब शुल्कसमेत बुझाउन आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने १९५ कम्पनी, सरकारी कार्यालय,..
दशैँमा मासुको अभाव नहुने विभागको दाबी, यस्तो छ तयारी
काठमाडौँ, ७ असोज । यस वर्षको दशैँमा उपत्यकाभित्र मासुको अभाव हुन्छ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको पशुपक्षी विभागले जनाएको छ । केही दिनदेखि केही सञ्चार संस्थाले दशैमा मासुको अभाव हुन्छ भन्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि पछिल्लोपटक विभागले सो प्रतिक्रिया दिएको हो । उपत्यकामा झण्डै ३५ देखि ४० लाख मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ । नागढुङ्गा प्रहरी चेकपोष्टले दशैमा झण्डै २० देखि २५..
ब्यवसाय गर्ने नयाँ 'आइडिया' भएका युवालाई सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ, ७ असोज 'शुरुवाती कोष निर्देशिका २०७६' बाट अर्थमन्त्रालयले नयाँ युवा व्यवसायीलाई सुरुवाती ऋण (बिउ पूँजी) उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्रालयले निर्देशिकाको खाका तयार गरिसकेको छ । यो निर्देशिका केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। यो निर्देशिका 'व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४' को दफा ४५ बमोजिम बनेको हो । निर्देशिकामा १७ दफा रहेका छन् । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, गैर..
फेरि बढ्यो सुन-चाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
काठमाडौं, ७ असोज । सुनको मूल्य मंगलबार उकालो लागेकाे छ । सुन प्रतितोला १०० रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ४०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी तेजाबीको मूल्य प्रतितोला सुन ७१ हजार १०० रुपैयाँ छ । यस्तै‚ चाँदी प्रतितोला ८८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार, आइतबार र..
एनसेलको आकर्षक 'अफर' : जित्नुहोस बोनस र पुरस्कार !
काठमाडौं, ६ असोज । एनसेलका ग्राहकहरुले अब आफ्नै धुन रेकर्ड गरी आफ्नो प्ले ब्याक रिङ्ग टोन (पिआरबिटी) को रुपमा राख्न र अरुलाई सो धुन प्रयोग गर्न आह्वान गर्न सक्ने भएका छन् । साथै धुन बनाउने ग्राहकले आफ्नो धुनलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरी प्रत्येक हप्ता आकर्षक पुरस्कार जित्न सक्नेछन् । एनसेल प्रा.लि.ले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि लोकप्रिय सेवा ‘पिआरबिटी आफ्नै धुन’ को..
दसैं नजिकिदा फेरी बढ्याे सुनकाे मूल्य, कति छ आज ?
काठमाडौं, ५ असाेज । आइतबार नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य बढेकाे छ । शुक्रबारकाे तुलनामा आज सुनकाे मूल्य प्रतिताेला ३ सयले बढेकाे हाे । शुक्रबार प्रति तोला ७१ हजार प्रति तोलामा कारोबार भएको सुन आइतबार ३ सय रुपैयाँ बढेर ७१ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेकाे छ । शुक्रबार प्रतिताेला ८ हजार ६० रूपैयाँमा..
आजैदेखि १५ करोड सहुलियत ऋण बाँड्दै नेपाल प्रहरी
काठमाडाैं, ५ असाेज । नेपाल प्रहरीले १५ करोड सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रहरीले कल्याण कोषमा भएकाे १५ करोड रुपैयाँ दसैं-तिहारका उपलक्ष्यमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कारदेखि माइक्रो ओभनसम्म खरिद गर्न उपलब्ध गराउने भएकाे हाे । नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको साउन २९ को निर्णयअनुसार किस्ताबन्दीमा सिनियर अधिकृत, जुनियर अधिकृत र सकल दर्जाका लागि अधिकतम ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो। कोषले सिनियर अधिकृतका लागि..
व्यवसायी निराश नहुनुहोस्, व्यवसायको वातावरण सुधार हुँदै छ : अर्थमन्त्री
चिप्लेढुङ्गा, ४ असोज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले व्यवसायको वातावरण सुधार हुँदै गएकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । कास्कीको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६५औँ वार्षिक अधिवेशनमा उहाँले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक उन्मुख भइरहेकाले व्यवसायीलाई निराश नभई उत्साहित हुन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री खतिवडाले उत्पादनमा जोड दिई पूँजी बजारको विकासलाई प्राथमिकता दिएको र लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिरहेको बताउनुभयो । काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको बाटोको स्तरोन्नतिका..
‘मुलुकको समृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड’
लहान, ४ असोज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मुलुकको समृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सिरहाको गोलबजारमा आज सिरहा सुपरमार्केट प्रालिद्वारा सञ्चालित एबी मलको उद्घाटन गर्दै उहाँले अरु देशबाट सामान मगाई बेचेर मात्र मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकलाई साँच्चै समृद्ध बनाउने हो भने अब व्यवसायीले व्यापारसँगै उद्योग सञ्चालनको दिशामा पनि सोच्नुपर्ने..
इलाम, ४ असोज सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नम्बर लिन सबैलाई अनिवार्य गरेसँगै इलाममा पनि यो नम्बर लिनेको सङ्ख्या उल्लेखनीयरूपमा बढेको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षको शुरुबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन ताकेता गरेसँगै इलामको कर कार्यालयमा नम्बर लिने ह्वात्तै बढेको छ । करदाता सेवा कार्यालय इलामबाट हालसम्म सात हजार ६६६ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । कार्यालयबाट हालसम्म आयकर..
यूएईमा अलपत्र १ सय २० जना कामदारलाई घर फर्काइयो
यूएई, ३ असोज । यूएईको आबुधाबीमा अलपत्र १ सय २० जना नेपाली कामदारलाई घर फर्काइएको छ । नेपाली दूतावास, रोजगारदाता कम्पनी र स्थानीय अदालतको पहलमा उनीहरुलाई घर फर्काइएको हो । आबुधाबीमा रहेको एड्भान्स फ्यासिलिटी म्यानेजमेण्ट सर्भिसेस् 'एलएलसी' मा कार्यरत २ सय ५० जना नेपाली कामदार समस्यामा थिए । समस्यामा परेका यी कामदारमध्ये १ सय २० लाई घर नेपाल फर्काइएको हो । बाँकी कामदार..
दसैं नजिकिदै गर्दा फेरी बढ्याे सुनकाे भाउ
काठमाडौं, ३ असाेज । पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा निकै उतारचढाब भइरहेकाे छ । सुनकाे मूल्य तिब्र रूपमा बढ्ने र झिनाे अङ्कले घट्ने क्रम जारी छ । नेपाली बजारमा बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार पनि सुनकाे मूल्य बढेकाे छ ।आज छापावाला सुनको भाउ प्रतितोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेर ७१ हजार पुगेको हो । यस्तै, तेजाबी सुन पनि प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले नै बढेर ७० हजार ७००..
नेपाल-भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्दै
काठमाडौं, ३ असाेज । सेप्टेम्बर २६ र २७ गते नेपाल भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन बैठक बस्ने भएको छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ को पुनरावलोकन सम्बन्धि तेस्रो बैठक नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने भएकाे हाे । यसका लागि सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीमा मन्त्रालयसहित अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका उच्चपदस्थ..
काठमाडौँ, ३ असोज । चितवनका कुखुरापलक किसान, सप्लायर्य तथा बिक्रेताहरुको भेलाले अण्डाको मूल्य ३० रुपैयाँले बढाएको बढाएको छ । व्यावसायमा घाटा बढ्न थालेको भन्दै उत्पादकबाट मूल्य वृद्धिको माग बढेको थियो । २२० प्रतिक्रेट रहेको ठूलो अण्डाको मूल्य बढाउर २५० पु¥याइएको नेपाल दाना, अण्डा, कुखुरा वितरक संघका अध्यक्ष तेजनारायण पाण्डेले बताए । सानो अण्डाको मूल्य पनि केही दिनमा वृद्धि गरिने संघले जनाएको छ । कारोबारबाट..
चाडबाडको समयमा बीस हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिने
काठमाडौँ, २ असोज सरकारले चाडबाडको समयमा उपभोक्ताको मागलाई हेरेर चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारी कम्पनीमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ । भदौ अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई १०÷१० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी अयात गर्न स्वीकृति दिएको हो । चाडपर्वको समयमा व्यापारीले चिनीको..
दुई हजार करार कर्मचारीको माग, ५० हजार आवेदन, कहाँ कति ?
काठमाडौं, २ भदाै । पञ्जीकरण विभागमा २ हजार करार कर्मचारी माग गरेकाे छ । विभागले करारमा दुई हजार कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नको लागि आवदेन माग गरेकोमा ५० हजार भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा करार कर्मचारी माग गरेर सूचना निकालिएको थियो। भदौ १७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा मंगलबारसम्ममा ५० हजारभन्दा बढीले आवदेन दिएको विभागले..
घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
काठमाडौँ, २ असोज । बिहीबार सुन तथा चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको जानकारीअनुसार बिहीबारको लागि छापावाला सुन प्रतितोला ७० हजार ७ सय र तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार चार सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सोमबारदेखि सुनको स्थिर मूल्य ७१ हजार तीन सय रुपैयाँ कायम रहेको थियो । तर बिहीबार सुन प्रतितोला ६ सय रुपैयाँ घटेको..
काठमाडौँ, २ असोज । नेपाल पत्रकार महासङ्घले दशैँ नजिकिरहेको सन्दर्भमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराउन बाँकी पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउन र दशैँ पेश्की व्यवस्था गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आग्रह गरेको छ । काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारी र सदस्यहरुको बुधबार बसेको बैठकले पत्रकारको बाँकी पारिश्रमिक र दशैँ पेश्की उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो । बैठकले श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन..
काठमाडाैं, १ असाेज । लगातार मूल्य बढेपछि सुनको माग ८० प्रतिशतले घटेको छ। अहिले बजारमा प्रति तोला सुन ७१ हजार ३ सय रुपैयाँका दरले कारोबार भइरहेकाे छ। केही समयअघि प्रति किलो ५९ हजार ५ सयमा किनबेच हुँदै आएको सुनको मूल्य एकाएक बढेको छ। प्रति तोला ७३ हजार ५ सयसम्म पुगेको सुनको मूल्य केही घटेर प्रतितोला ७१ हजार ३ सयमा कारोबार हुँदै आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका..
Results 1683: You are at page 10 of 57